Wasiirad baaskiil ku tagtay isbitaal si ay u foolato | Saxil News Network
Wasiirad baaskiil ku tagtay isbitaal si ay u foolato
August 19, 2018 - Written by editor
Lahaanshaha sawirkaJULIE GENTER/INSTAGRAM
Image captionMs Genter iyo Odaygeeda oo isbitaalka ku tegey baaskiil
Haweeneyda wasiiradda haweenka ka ah dalka New Zealand ayaa baaskiil ku aadday isbitaalka si ay ugu soo umusho cunugeeda ugu horreeya, ka dib markii ay u dhammaadeen 42 isbuuc.
Julie Genter oo siyaasad ahaan ka tirsan xisbiga Green Party ayaa sheegtay in ay baaskiilka qaadatay si looga soo umuliyo sababtoo ah “Ma jirin boos ku filan oo ay ka heli kartay gaariga”
Waxa ay barteeda Instagram-ka ku soo bandhigtay sawirro laga arkayo iyada iyo odageeda oo kala wata labo baaskiil, oo waliba u muuqda in ay ku raaxeysanayaan “baaskiil waditaanka quruxda badan ee subaxa Axadda”.
Haweenay aan xanuun dareemeynin
Bishii Juun ayay ahayd markii ay haweeneyda ra’iisul wasaaraha ka ah dalkaas New Zealand, Jacinda Ardern, noqotay hogaamiyihii labaad ee dunida oo iyadoo xilka heysa umushay.
Ra’iisul wasaaradda iyo wasiiraddaan ayaa labaduba waxa ay ku umuleen hal isbitaal oo dadweynaha loogu tala galay oo lagu magacaabo Auckland City Hospital.
Ms Genter oo ku dhalatay dalka Mareykanka ayaa horay Instagram-ka ugu shaacisay in ay uur leedahay, iyadoo sheegtay in ay heli doonto qof kale oo ku soo biira kooxda baaskiil wadidda, kaasoo ay ula jeedday cunuga ay dhali doonto.
Ka gudub Instagram daabacaad W.Q julieannegenter
Dhammaadka Instagram daabacaadda qore julieannegenter
Ms Genter oo 38 sano jir ah ayaa sidoo kale xukuumadda waddankaas ka haysa xilka wasiirka gaadiidka, waxaana aad loogu yaqaannaa in ay u dooddo baaskiil wadidda.
“Waa ina kaas, nasiib wacan noo rajeeya” ayay u soo qortay dadka ku xiran barteeda Instagram-ka, waxayna intaas ku dartay: “Aniga iyo odaygayga waxaan soo kaxeysannay baaskiillo, waayo gaariga ma uusan lahayn boos nagu filan annaga iyo qalabka aan u baahneynba… balse waxaan xitaa ka helay farxad fiican!”
Iyadoo kaftamaysa ayey sidoo kale sheegtay in usbuucyo ka horba ay fiicneyd in ay baaskiil sii waddo si ay ugu fududaato foosha.
Sannadihii dambena, xildhibaannada dalalka Sweden iyo Talyaaniga ee ku jira baarlamaanka midowga Europe ayey indhaha caalamka qabanayeen iyagoo codadkooda dhiibanaya xilli ay carruurtooda dhabta ku heystaan.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @ianbremmer
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @ianbremmer
Wasiiraddaan, oo qaadan doonta fasax saddex bilood ah oo ay umusha uga soo baxeyso ayaa ku soo biiri doonta tiro siyaasiyiin ah oo carruur markaas uun dhalatay ku heysta xafiisyada.
Sannadkii 1970-kii Xildhibaannaddii ugu horreysay ayaa New Zealand ku umushay iyadoo wali baarlamaanka ka tirsan, halka haweeney kale oo siyaasiyad ahna ay sidaasoo kale xafiiskeeda ku nuujisay sannadkii 1983-kii.
Australia ayaa sannadkii 2016-kii baddashay sharciyadeeda si xildhibaannada baarlamaanka loogu oggolaado in ay carruurtooda naaska ku nuujiyaan, ama ay masaasad ku siiyaan aqalka wakiillada gudihiisa